Memphis Depay⇒Liverpool, Griezmann⇒ Barcelona Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda. - Gool24.Net
Memphis Depay⇒Liverpool, Griezmann⇒ Barcelona Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda.
Liverpool ayaa raga uga shaqeeysa suuqa kala iibsiga u dirsatay inay daawadaan kooxda Lyon ee horyaalka Faransiiska isbuucii la soo dhaafay iyagoo isku diyaarinaya inay u dhaqaaqaan saxiixa weeraryahan Memphis Depay. (Daily Express)
Alexandre Lacazette ayaa isaga tagi kara Arsenal haddii laga badiyo finalka Europa League ee ay la ciyaarayaan Chelsea xilli lala xiriirinayo Barcelona iyo Atletico Madrid. (The Sun)
Manchester United ayaa xiriir hordhac ah la sameysay Fulham iyagoo doonaya inay la soo wareegaan xiddiga 19 jirka Ryan Sessegnon kaasoo muddo dheer diirada u saarnaa Tottenham. (Sky Sports)
Goolhayaha Barcelona iyo xulka Hollan Jasper Cillesen oo 30 jir ah ayaa hogaaminaya goolhayayaasha u sharaxan bedelka David de Gea ee Man United haddii goolhayaha reer Spain uu ka tago Old Trafford xagaagan. (Record)
Xiddiga Liverpool Adam Lallana oo 31 jir ah ayaa doonaya inuu dib ugu laabto Southampton xagaagan. (Dai;ly Expre)
Kooxda heysata horyaalka Talyaaniga ee Juventus ayaa dooneysa macalinka Chelsea Maurizio Sarri ka dib markii uu tababare Allegri shaaciyay inuu kooxda ka tagayo dhamaadka xilli ciyaareedkan. (Daily Express)
Juventus ayaa sidoo kale xiiseyneysa tababaraha kooxda Tottenham Maurico Pochettino kadib markii la shaaciyay in Maxi Allegri uu kooxda ka baxayo. (Daily Express)
Daafaca midig ee Brazil Dani Alves oo 36 sanno jir ah ayaa hakad geliyay wadahadalo qandaraas kordhin ah oo uu la geli lahaa PSG madaama uu doonayo inuu u wareego Premier League (UOL Esporte)
Manchester United ayaa weli tartan ugu jirta saxiixa kabtanka Ajax 19 jirka Matthijs de Ligt inkastoo aysan u soo bandhigi karin Champions League xilli ciyaareedka danbe iyadoo ilo ku sugan Amsterdam ay sheegayaan in daafaca uu weli xiiseynayo inuu u dhaqaaqo Old Trafford. (Telegraph)
Manchester United ayaa sidoo kale isha la raaceysa xiddiga 19 jirka khadka dhexe ee Fenerbahce, Elif Elmas. (Daily Mail)
Marcus Rashford ayaa doonaya in loo sharaxo halka Manchester United u jiheysaneyso madaama uu haatan macalin u yahay tababare Ole Gunnar Solskjaer ka hor inta uusan qandaraas cusub u saxiixin kooxda Old Trafford ka dhisan. (The Sun)
Qareenka xiddiga Atletico Madrid Antoine Griezmann oo 28 sanno jir ah ayaa si dhaqso ah u la kulmi doona Barcelona si loo dhameeyo heshiiska xiddiga reer France. (Marca)
Griezmann ayaa ka tagaya Atletico Madrid xagaagan laakiin Manchester City iyo PSG ayaa sheegay inaysan u dhaqaaqi doonin saxiixa weeraryahanka. (Independent)
Xiddiga khadka dhexe ee Atletico Madrid 22 jirka Rodri ayaa dalab rasmi ah ka helay kooxda horyaalka Ingariiska heysata ee Manchester City,. (AS)
Arsenal ayaa ku dhow inay 10.5 milyan ginni kula soo wareegto daafaca reer Argentina Walter Kannemann oo 28 sanno jir ah kaasoo haatan u ciyaara kooxda reer Brazil ee Gremio. (Daily Mirror)
Chelsea ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka reer Brazil ee kooxda Ajax 22 jirka David Neres sababtoo ah waxa ay ka rajo qabaan in dib loo dhigi doono xayiraada laga saaray labada suuq kala iibsi ee soo socda. (Daily Star)